आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी ओली सरकारले लगायो यस्तो प्रतिबन्ध, जारी भयो सूचना — Sanchar Kendra
आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी ओली सरकारले लगायो यस्तो प्रतिबन्ध, जारी भयो सूचना
काठमाडौं । बेलायतमा कोराना स्वरुप फेरिएको भाइरस संक्रमण तीव्र भएसँगै ओली सरकारले बेलायतबाट हुने उडान र यात्रु आगमनलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि भारत, हङकङ र स्पेनसहितका ४० भन्दा धेरै देशले बेलायतबाट हुने उडान प्रतिबन्ध गरिसकेका छन् ।
अध्यागमन विभागका अनुसार गत मंगलबारयताको ६ दिनमा मात्रै बेलायतबाट एक सय २ यात्रु नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार, बेलायतबाट कुनै पनि वायुसेवाले बुधबार राति ११ बजेर ५९ मिनेटपछि यात्रु ल्याउन पाउने छैन ।
त्यसैगरी बेलायतमा ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउन पनि पाइने छैन । तर, नेपालबाट कुनै पनि वायुसेवा चढेर बेलायत जान रोक लगाइको छैन । त्यस्तै बेलायतबाट हुन सक्ने मेडिकल लगायतका कार्गो उडानलाई पनि रोक लगाइएको छैन । प्राधिकरणले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि बेलायतबाट हुने यात्रु उडान आगमनमा प्रतिवन्ध लगाएको हो ।
त्यसो त बेलायतसँग जोडिएका युरोपेली युनियनका देशहरुले आइतबारदेखि नै पनि फरक-फरक शैलीको प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । संक्रमण फैलिने डरले फ्रान्सले बेलायतबाट फ्रान्स छिर्ने मुख्य नाकाहरुमा सोमबारबाटै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । बेल्जीयम, क्यानडा, जर्मनी, आयरल्याण्ड, पोर्चुगल, ईटाली, रोमानिया, रसिया र स्वीजरल्याण्डले पनि बेलायतबाट यात्रुहरु आउनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
ईरानले दुई साताका लागि बेलायतबाट हुने उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बेलायतका स्वास्थ्य सचिव म्याट ह्यानककले बीबीसीसँग कुरा गर्दै नयाँ प्रकृतिको भाइरस कोरोना भाइरसभन्दा ७० प्रतिशत छिटो अरुमा सार्ने र परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गइरहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘त्यसै त हामीकहाँ संक्रमण दर घटाउनका निम्ति आवश्यक नियम नागरिकले पालना नगर्ने शैली छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ शैलीको भाइरस आए हामीलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ ।’ जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डाक्टर समिरमणि दीक्षितले भाइरसले स्वरुप बदलेपछिको असर त्यसबाट स्वास्थ्यमा कति क्षति पुग्छ भन्नेबारे अनुमान र अड्कलहरु भए पनि पर्याप्त प्रमाणहरु संकलन भइनसकेको अवस्था रहेको बताए ।
उनले भाइरस तीव्र गतिमा सर्ने भएकाले पूर्व तयारीहरु बलियो बनाउनु नै उत्तम विकल्प भएको बताए । उनले भने, ‘यसको असर कति गम्भीर हुन्छ भनेर थाह नभइसकेकाले पनि हामीले पूर्वतयारीहरु भने गरेकै राम्रो हो ।’
के हो बेलायतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार ?
नयाँ भेरियन्टको चिन्ता
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट धेरै भिन्न किसिमको नभएपनि यसले वैज्ञानिकहरुको चिन्ता भने बढाएको छ । निकै तीव्र गतिमा भारतले आफ्नो प्रकृति बदल्नु वैज्ञानिकहरुको लागि एक चिन्ताको विषय हो । यसरी भाइरस म्युटेट हुँदा भाइरसको महत्वपूर्ण हिस्सामा पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यसको विषयमा थप अनुसन्धान गर्नु जरुरी हुन्छ ।
साथै यसको थप असरको बारेमा जान्न थप अध्ययनको आवश्यकता पार्छ । अर्को चिन्ताको विषय भाइरसको क्षमता बढ्नु नै हो । प्रयोगशालामा गरिएको अध्ययनको क्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमित पार्न सक्ने क्षमता पनि बढेको पाइएको छ । यस्तोमा आगामी दिनमा कोरोना संक्रमित तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
अहिले देखिएको कोरोनाको भेरियन्टको सुरुआत सेप्टेम्बरको मध्यमा बेलायतको दक्षिणपूर्वमा देखिएको थियो । अहिले यो संक्रमण बेलायतको धेरै स्थानमा देखिएको छ । डिसेम्बरको ९अघिको एक सातामा लण्डनमा ६२ प्रतिशत कोरोना संक्रमितमा नयाँ प्रकारको कोरोना पाइएको थियो । त्यसको तीन साताअघि सम्म यस किसिमको संक्रमण २८ प्रतिशत मानिसमा देखिएको थियो ।
कहाँबाट आयो नयाँ भेरियन्ट ?
भाइरस म्युटेट हुनु सामान्य भए पनि कसरी यो भाइरस म्युटेट भयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय हुने गरेको छ । अहिलेसम्म यसको स्पष्ट जानकारी मिलेको छैन । तर, वैज्ञानिकहरुले कुनै कमजोर संक्रमितको शरीरबाट कोरोना भाइरसले थप शक्तिशाली हुने मौका पाएको हुन सक्ने बताएका छन् ।
अहिलेसम्म यस नयाँ संक्रमणको कारण मृत्युदर बढेको कुनै प्रमाण पाइएको छैन । तर, यस विषयमा अनुसन्धान गरिनु भने जरुरी छ । यद्यपि नयाँ भेरियन्टले संक्रमितको संख्या बढाउने र जसको कारण अस्पतालमा पनि मानिसहरुको भिड बढ्छ । जसको कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
भेरियन्टमा खोपको असर
अहिलेसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको असर नयाँ भेरियन्टमा पनि रहने बताइएको छ । नयाँ भेरियन्टमा पनि अनय लक्षण र यसले पार्ने असरमा कुनै परिवर्तन नआएको हुँदा खोपले भेरियन्टमा पनि काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
विश्लेषकहरु भने यसै किसिमले भाइरस शक्तिशाली बन्दै गएको अवस्थामा भने आगामी दिनमा खोपले पनि काम नगर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यदि कोरोना भाइरस खोपभन्दा पनि शक्तिशाली बन्यो भने कोरोना खोप पनि फ्लुको खोप जस्तै निरन्तर अपडेट गरिरहुनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
युरोपेली आयोगले ईयूमा आबद्ध देशहरूलाई कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकारलाई लिएर यूकेसँगको यात्रामा उनीहरूले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सिफारिस गरेको छ। ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरूको एउटा बैठकअघि आयोगले पछिल्लो सिफारिस गरेको हो। सदस्य राष्ट्रहरूले त्यो मान्नैपर्ने बाध्यता चाहिँ छैन।
सीमा नियन्त्रणसम्बन्धी आ-आफ्ना नीति अपनाउन स्वतन्त्र भएकोले सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो कदमलाई निरन्तरता पनि दिन सक्छन्। यसअघि सप्ताहान्ततिर फ्रान्सले यूकेसँग जोडिएका सिमाना बन्द गर्दा दुई देशबीच सामान ओसारपसार गर्ने हजारौँ लरीहरू अलपत्र परे।
लगभग ईयूका सबै २७ सदस्य राष्ट्रले यूकेबाट हुने यात्रामा अहिले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। साझा नीति अवलम्बन गर्ने प्रयासमा ईयूको आकस्मिक बैठकहरू बस्दै आएका छन्। कोभिड-१९ को परीक्षण गराउने वा फर्केर एकान्तवासमा जाने प्रतिबद्धता जनाउने नागरिकलाई आ-आफ्नो देश फर्कन दिन ईयूका सदस्य राष्ट्रलाई युरोपेली आयोगले एउटा वक्तव्यमार्फत् सिफारिस गरेको छ।
यद्यपि अत्यावश्यक नपरेको अवस्थामा गरिने यात्राहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ। ईयूभित्र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने लरी चालकजस्ता मानिसको हकमा यात्रा प्रतिबन्ध र अनिवार्य परीक्षणको व्यवस्था गर्न नहुने आयोगको भनाइ छ।
यूकेबाट फ्रान्स र ईयूका अरू सदस्य राष्ट्र जानका लागि चाहिँ कोरोनाभाइरस परीक्षण गराएको हुनुपर्ने उसको भनाइ छ। फ्रान्स र यूकेबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार दुई देशबीच कार्गो र केही यात्रुसेवा पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
लरी चालक तथा ईयूका नागरिकले यात्रा गर्न पाउनेछन्। तर उनीहरूले कोरोनाभाइरस परीक्षण गराएको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनुपर्ने हुन्छ। हवाई, डुङ्गा तथा युरोस्टार रेलसेवा बुधवारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउनेछन्।
अरू ककसले यात्रा प्रतिबन्ध लगाए?
यूकेबाट गरिने यात्राको हकमा युरोपभित्र मात्रै प्रतिबन्ध सामना गर्नुपरेको छैन, विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकले यात्रामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यूके र केही अरू देशमा पछिल्लो १४ दिनदेखि बस्दै आएका गैरअमेरिकी नागरिकमाथि प्रवेशमा रोक लगाएको छ।
साउदी अरब, कुवेत र ओमानले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि आफ्ना सिमानाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएका छन्। डेनमार्कका साथै अस्ट्रेलिया, इटली र द नेदरल्यान्ड्समा पनि कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकार फेला परेको छ।